သင့်ကို ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာမရှိပဲ သင့်အဖွဲ့ကို ဘယ်လို စည်းရုံးမလဲ - Digital Laboratory Myanmar
သင့်ကို ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာမရှိပဲ သင့်အဖွဲ့ကို ဘယ်လို စည်းရုံးမလဲ
Article, Remote Work, Team Work
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိရိစ္ဆာန်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးကြပေမဲ့ ဟုတ်နေပါတယ်လို့ ”Exceptionally Human. Successful Communication inaDistracted World” လို့အမည်ရတဲ့ စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သူ professional development coach Brian Shapiro က ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပင်ကိုစရိုက်အတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ကြတယ် တကယ်လို့ သင်က တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားလာစေပြီး စည်းရုံးတော့မယ်ဆိုရင် ပင်ကိုစရိုက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြချင်ရင် သင့်မှာ ရှင်းလင်းအောင် ဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်တော့ ရာထူး နယ်ပယ်အလိုက် gender ခြားနားမှုတွေ ယဥ်ကျေးမှုမတူညီမှုတွေ ပေါ်မူတည်ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာ မတူညီတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် project တွေမှာ အတူတကွလုပ်ဆောင်နေကြပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ချက် အယူအဆတွေရှိတဲ့ လူအမျိုးမျိုးပေါ် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုက မူတည်နေတဲ့ service industry ပိုင်းက စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဒီအချက်တွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကျိုးရှိတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုဟာ projectတွေကို အတူတကွ လုပ်ကိုင်အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတွေ ခင်မင်နားလည်မှုတွေပေါ်ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သင့် managerရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေထဲကတစ်ခုခု အကျိုးအကြောင်းမသင့်ရင် မှားနေကြောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ လုပ်ဆောင်ခိုင်းတာကို သင်သဘောတူသည်ဖြစ်စေ သဘောမတူသည်ဖြစ်စေ သူတို့မှာ အခွင့်အာဏာပိုရှိတဲ့အတွက် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင် လုပ်ဆောင်ရဖို့များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ project managerတွေမှာလည်း သူတို့အခက်အခဲနဲ့ သူတို့ရှိနေပါတယ်။ အခွင့်အာဏာအပြည့်အဝမရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ သူတို့ဟာ လူတိုင်းရဲ့အပြိုင်အဆိုင် အကြံပြုချက်တွေကြားမှာ စီမံခန့်ခွဲနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာဆို သင် အခက်အခဲတွေကြုံလာရင် စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ဘယ်လိုထားမလဲ။ ဒီအခက်အခဲတွေကို သင်ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး အဖွဲ့ကို ဆက်အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာဆက်ကြည့်ရအောင်။
ထူးခြားအောင်မြင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရဲ့ အဓိကအချက် ၃ချက်
Three Pillars of Exceptional Communication ရဲ့ အဓိက အချက်တွေကတော့ – Trust – တစ်ဖက်လူက သင့်အပေါ် ဘယ်လောက် ယုံကြည်စိတ်ချသလဲ ဆိုတာ Emotions – သင်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တစ်ဖက်လူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ Reason – တစ်ဖက်လူက သင့်ရာထူးကို ဘယ်လောက် သင့်တော်ပြီး လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုပြီး မြင်တဲ့ အမြင် စတဲ့ Trust, Emotion နဲ့ Reasonဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေက တစ်ဖက်လူအပေါ် လွှမ်းမိုးပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရောက်ဖို့ ဒီအချက်တွေကို ဘယ်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို သိကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင်ရော သင့်အဖွဲ့ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ဒီtoolတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ။
သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်စေမယ့်အဆင့် ၆ဆင့်
အရိုးရှင်းဆုံးအနေနဲ့ သင်က တစ်ခြားလူကို လွှမ်းမိုးပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရာထူးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမပါဝင်ပဲ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်နဲ့ သင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဦးဆောင်ပြီး ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အရည်အချင်းကို လေ့လာအကဲဖြတ်ပါ
သင့်ကိုယ်သင် တခြားလူတွေနဲ့ ဘယ်လို ပြောဆိုဆက်ဆံသလဲဆိုတာ လေ့လာတာကနေ စတင်ပါ။ လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအားသာချက်တွေကို သေချာအကဲဖြတ်ဖို့ အချိန်မပေးကြပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုမရှိခြင်းက ဖြစ်စဥ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် အပြစ်ရှာပြီး သင်မှားနေတာတွေကို လိုက်ရှာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ အကဲဖြတ်တာက သင့်ကိုယ်သင် ပိုနားလည်ပြီး လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေမှာ ပိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်လာဖို့ ကူညီပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မရေရာခြင်းတွေအတွက် စိတ်ရှည်မှုရှိအောင် တည်ဆောက်ပါ
”ကျွန်တော်တို့က Google, Siriနဲ့ Alexa မှာရှိတဲ့အရာတွေ အကုန်လုံးကို သိစရာမလိုအပ်ပါဘူး”လို့ Shapiroက ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သိချင်တာတွေရဲ့ အဖြေက ကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Aristotleကတော့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေထက် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကို လေ့လာစူးစမ်းနေလောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစုက သမိုင်း၊ သင်္ချာနဲ့ သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေ သင်ယူခဲ့ကြပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ မျှဝေခံစားဖို့ မသင်ပေးကြပါဘူး။ public speaking class နဲ့ interpersonal communication class မှာကလွဲရင် လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါ ဖြစ်လာနိင်တဲ့ theory တွေ concept တွေကို ဘယ်သူမှ မသင်ပေးခဲ့ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို သင်ပြပေးမယ့် မိဘတွေ၊ ဆရာတွေ ဒါမှမဟုတ် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ့် ပင်ကို အသိစိတ်နဲ့ လူမှုရေး ဓလေ့တွေရှိတာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၃။ နားထောင်ပါ။ သင်ယူပါ။
လူတွေက သူတို့သဘောကျပြီး ယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို ပိုပြီး လုပ်ပေးချင် ကူညီပေးချင်ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်က လူအများစုနဲ့တော့ သူငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုအသုံးပြုပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကသင့်အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျပါတယ်။ Brian ကတော့ ဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေ တိုးတက်လာစေဖို့ တစ်ဖက်လူက ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာနဲ့ဘာတွေ စိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုတာတွေကို သိအောင်ကြိုးစားပြီး ဒီ project အပေါ် သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကနေ ဘယ်လိုအရာတွေကို မျှော်မှန်းထားလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာစူးစမ်းဖို့ အကြံပေးပါတယ်။။’မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးပါ။နားထောင်ပါ။ ပြီးတော့ အာရုံစိုက်ပါ ။ ဘယ်လိုအရာတွေက သူတို့ကိုအောင်မြင်စေတာလဲ။ သူတို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာရောဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဒီprojectကိုကိုင်တွယ်ဖို့ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေလိုအပ်လဲ” စတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးဖို့ Shaprio က အကြံပေးပါတယ်။ သင်ဟာ တခြားသူတွေနဲ့ project နဲ့ organization ကို အောင်မြင်ဖို့ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် အလေးထားတယ်ဆိုတာ သိမြင်အောင် ဖော်ပြပြီးတော့လည်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။
၄။ သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တာတွေနဲ့ နေသားကျလာအောင် လုပ်ပါ
တစ်ခါတရံမှာ စကားစပြောရတာက အပြောပဲလွယ်ပြီး တကယ်တမ်းကျ ခက်ခဲပါတယ်။ တချို့မေးခွန်းတွေကို မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ သင် အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတာကို သတိထားသင့်ပါတယ်လို့ Brainက ဆိုပါတယ်။ ‘သင်က တကယ်ကိုစိတ်ရင်း အမှန်အကန်နဲ့မေးကြောင်း သိသာအောင် မေးတတ်သလား? သင်က ဒီလို လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုမျိုးလုပ်ရတာ အဆင်ပြေသလား?” အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် တိုးတက်လာတဲ့အထိ သေချာလေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ အားနည်းချက်ရှိပါ ပြီးတော့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပါ
လုပ်ငန်းနေ့စဥ်ဘဝမှာ ”ဒါကအလုပ်လုပ်ရမယ့် company၊ ဒါတွေက သင်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေ၊ ခံစားချက်တွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီး အလုပ်ကိုပဲသေချာလုပ်” ဆိုတာမျိုးတွေက ပြောရတာလွယ်ပါတယ်။ ”သင်က အကြောင်းပြချက်ဆိုတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲ ကျန်ရှိနေပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို သတိမပြုမိဘူးဆိုရင် သူတို့ကို စိတ်ရှုပ် ဝမ်းနည်းအောင် ပြုလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကို အချက်အလက်တွေလက်ခံနိုင်စွမ်း နည်းစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြောက်ရွံ့စရာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ကြောက်ရွံလာနိုင်ပါတယ်။” ယုံကြည်မှုတစ်ခု တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကအားနည်းချက်တွေကို လက်ခံနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ စိတ်ခံစားချက်တွေကို တခြားတစ်ယောက်နဲ့ မျှဝေတာက ကိုယ့်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖော်ပြသလို ဖြစ်တာမို့ တချို့လူတွေအနေနဲ့ စိုးရိမ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က သူရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြလာရင် ကိုယ်ကလည်း အပြန်အလှန်အနေနဲ့ သူ့အပေါ်ကို ကောင်းကောင်းဆက်ဆံပေးပြီး ယုံကြည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပြုအမူ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတစ်ဆင့်သင့်အဖွဲ့က သူတို့နောက်မှာ သင်ရှိကြောင်း သူတို့အမှားတွေလုပ်မိရင်လည်း ဆက်ပြီး အားပေး ကူညီနေမယ်ဆိုတာကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၆။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပါ ကူညီဖေးမပြီး အားပေးပါ
Creative process တွေဟာ risk များပြီး ရှုပ်ထွေးတာမို့ မပြီးခင်အထိ final product က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ပြီးသွားရင် တကယ်သဘောကျမလား? သင်က creative industry မှာ လုပ်တဲ့သူဆိုရင် ကိုယ်စီစဥ်ထားတဲ့ အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကြောင့် စိတ်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ကို ပြန်ကြည့်ပြီး ဘယ်နေရာက လွဲနေတယ်ဆိုတာကို ရှာဖို့လိုပါတယ်။ ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကိုအသုံးချပြီး အမှားရှာတာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာက တခြားသူကိုသင်ယူတိုးတက်ဖို့ ကူညီပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒကို ဖော်ပြပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းကို လေ့ကျင့်တာပါပဲ။ ပြဿနာကိုအဖြေရှာတဲ့ ဘုံပန်းတိုင်နဲ့ ကိုယ်တိုင် collaborative team ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Three Pillars of Communication တွေဖြစ်တဲ့ Trust , Emotionနှင့် Reason တွေက အလုပ်မှာ တခြားသူတွေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အချက်အလက်တွေကို တခြားသူတွေ ဘယ်လိုသဘောပေါက်နားလည်သလဲဆိုတာကို ပိုသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ reaction မပါပဲ interact လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်ဟာ project manager တွေလို တစ်ခြားသူတွေကို စီမံခန့်ခွဲရပေမယ့်သင့်မှာ leadership title မရှိဘူးဆိုရင် ဒါဟာ သင့်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ သင်က အဲ့လို role ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် :
ကျွန်တော်တို့အများစုက ကျွန်တော်တို့ထင်သလို communicator ကောင်းတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါ။
အရာအားလုံးကို သင်မသိနိုင်ဘူးဆိုတာကို လက်ခံပြီး ရေရေရာရာမသိတာမျိုးကို အရမ်း အာရုံမစိုက်ပါနဲ့။
သင်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကတခြားသူတွေအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်လဲဆိုတာကို အကဲဖြတ်ပါ။
သင့်အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ပြောကြားချက်တွေကို နားထောင်ပေးပြီး သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ အားသာချက်တွေကို တန်ဖိုးထားပြီး လေ့လာပါ။
အဆင်မပြေမှုတွေကို သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အစွမ်းအစတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ။
အားနည်းချက်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင် တည်ဆောက်ပါ။
Creative process မှာ ပါဝင်တဲ့ risk တွေ အားနည်းချက်တွေမှာ ကူညီပါ။
အပြုသဘောဆောင်ပြီး အားတက်စေတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကိုပေးပါ။
Trust ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ communication မျိုးဟာ Reason ပေါ်မှာ အခြေခံထားပြီး Emotion ကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာ အထက်ပါအချက်အားလုံးက ဖော်ပြပါတယ်။